ကျွန်မ၏မော်ဒယ်လေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ကျွန်မ၏မော်ဒယ်လေးများ
Posted by weiwei on Mar 12, 2012 in Photography | 44 comments
အခုတလော နေမင်းက အတော်ပူပြင်းနေပါတယ် … ပိတ်ရက်ဆိုရင် အိမ်ထဲကနေ တစ်ဖ၀ါးတောင်မှ မခွာချင်ဘူး … ပူလွန်းလို့ ဦးနှောက်တွေအရည်ပျော်ပြီး ဘာအိုင်ဒီယာမှလဲ စဉ်းစားလို့မထွက်ပြန်ဘူး … ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားရင်း ကွန်ပျူတာစားပွဲဘေးကနေ တစ်ချိန်လုံးကျွန်မကိုကြည့်ပြီး အစာတောင်းနေတဲ့ ငါးကလေးတွေကို ထိုင်ငေးနေမိတယ် …
အိုး .. ဒီလောက်လှတဲ့ မော်ဒယ်လေးတွေအိမ်ထဲမှာတင်ရှိနေတာပဲနော် … ဓါတ်ပုံရိုက်အုန်းမှလို့ အကြံရသွားတယ် … ဒီကောင်တွေကို ကျွန်မအဖေမွေးထားတာ တော်တော်ကြာပါပြီ … ၇ နှစ်လောက်တောင် ရှိပြီထင်ပါတယ် … တစ်ကောင်သေသွားရင် တစ်ကောင်သွားဝယ်ပြီး ပြန်ထည့်လေ့ရှိတာမို့ သူတို့အသက်အတိအကျကိုတော့ သေချာသတိမထားမိဘူး … ၂ နှစ်အတွင်းမှာ တစ်ကောင်မှ မသေသေးတာကိုတော့ သတိထားမိတယ်။
မျက်နှာကို အနီးကပ်စွဲလိုက်တော့ ၀ါးတားတားဖြစ်သွားတယ်
ငြိမ်ငြိမ်နေပေးပါဆိုတာ ပြောလို့မရဘူး ...
ကင်မရာရှေ့ကို သူချည်းပဲ ရောက်ရောက်လာတယ်
သူတို့နှစ်ကောင်ကဆင်တူ (ညီအစ်ကိုလားမသိဘူး )
ရေမှုန်လေးတွေကြောင့် အမြင်အေးစေတယ် ..
သူ့အရောင်က ဓါတ်ပုံမစားဘူး ...
သူကတော့ ဒါ့ပုံရိုက်ရတာကို ပျော်တယ်တဲ့ ..
ဒါ့ပုံရိုက်ဖို့ အကြံကုန်လာတော့ အိမ်ထဲကငါးကိုပဲ မော်ဒယ်လုပ်လိုက်ပါတယ် … Diskette လို့ခေါ်တဲ့ အဲဒီငါးလေးတွေကို အလှမွေးကြတယ် .. အရွယ်အစားက အခုမြင်ရတဲ့ပုံတွေက အကြီးဆုံးအနေအထားပါပဲ … အဖေ၀ယ်ထားတဲ့ကောင်တွေက အထီးတွေချည်းပဲလား ဒါမှမဟုတ် အမတွေချည်းပဲလားတော့မသိဘူး … ၇ နှစ်အတွင်း တစ်ခါမှ အကောင်ပေါက်တာမတွေ့ရဘူး … တစ်နေ့တစ်နေ့ စားလိုက် ချီးပါလိုက်နဲ့ပဲ ငါးကန်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ အကျဉ်းကျသလိုနေနေရတဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ဘ၀ကိုမြင်တွေ့ရတာ သနားဂရုဏာသက်မိတယ် …
ငါးကလေးကိုရိုက်ရတာ ခက်ပါတယ် … သူတို့ကလဲ ငြိမ်ငြိမ်မနေ … ရေကလဲလှုပ် .. လက်ကလဲလှုပ်တာမို့ ဒါ့ပုံတွေက အပြင်မှာမျက်စိနဲ့မြင်ရသလောက် မလှဘူး … ဒါ့ပုံဆြာ ဆရာသော့ကို သေချာမေးပြီး ရိုက်ထားပါသော်လည်း စိတ်တိုင်းမကျသေးဘူး … ဆြာ့ ဆြာတွေရဲ့ အကြံပေးမှုကို လိုချင်လို့ ပို့စ်တင်လိုက်ပါတယ် .. ဝေဖန်အကြံပေးကြပါလို့ ….
ဆရာကိုစိန်သော့ရဲ့ အကြံပေးချက်များကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
ရန်ကုန်ရောက်ရင် တစ်ကောင်လောက် လက်ဆောင်ပေးနော်
သများအိမ်မှာတော့ ဘီလူးငါးရှိတယ် သူရဲ့ထူးခြားတာက
မေ့လို့ OG လည်းရှိတယ်
မအီးတုန်းရဲ့ AKKO ရှိတယ်
သူတို့ကလေးမမွေးတာပဲ ကောင်းပါတယ် … စားစရိတ်နဲ့ ကရိကထသက်သာတာပေါ့ … ဒီကောင်တွေက အစားကြီးတယ် .. သူတို့အစာက သီးသန့်ရှိတယ် …၆ ကောင်ရှိတာ တစ်လ တစ်သောင်းဖိုးလောက်စားတယ် … ၃ ရက်တစ်ခါလောက် ရေလှယ်ပေးရတဲ့ဒုက္ခလဲ ရှိသေးတယ် .. မီးပျက်ရင် လူတွေက ဒီအတိုင်းနေလို့ရပေမယ့် သူတို့အောက်စီဂျင်က ပြတ်လို့မရလို့ အင်ဗာတာနဲ့ထားရတယ် …
ဟယ်တူကသားဆက်ခြားပေးတာလေ။ ဘယ့်နှယ်လို့ဖစ်မတုန်း။ သူ့လက်အပ်ရင်မျိုးတုန်းကုန်မှ။ စုတ်ခစုတ်ခ။
အမဝေကလည်း ရေကို အလိုအလျာက် သန့်စင်တဲ့စက်ရှိတယ်
အီလက်ထရောနစ်အတွက် စိတ်မပူနဲ့ အနော်တစ်ယောက်လုံးရှိတယ်
မလုပ်ပါနဲ. ဖရဲရယ် သူ.ဟာသူနေတာအကောင်း တော်ကြာ ငါးတွေရှော့ရိုက်သလိုဖြစ်သွားပါမယ်.. ဟဟဟ
ကျွန်တော့ စိတ်ထင် အဲလို လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတာရယ်.. ရေမှော် ပင် တွေဘာတွေ မရှိတာရယ် ကန်ကျဉ်းတာရယ် ကြောင့် ..သူတို့ မျိုးပွားဖို့ ခက်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အန်တီ ဝေေ၀ ရေ။ အန်တီ့ ငါးကန် မြင်မှ .. အိမ် က ငါးကန် ကိုသတိရသွားပြီ။ မသမာ သူ “တူ တစ်စု” ရဲ့ လက်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့ ငါးကန် ကော .. ဘယ်လို နေတယ်မသိ။ ငါးတွေတော့ သေကုန်ပြီ တဲ့ .. သတင်း သဲ့သဲ့ကြား .. :-(
အရင်တုန်းကတော့ ရေမှော်ပင်တွေ ကျောက်အလှတွေနဲ့ထားသေးတယ် … အဲဒါတွေရှိရင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာ ပိုခက်လို့ အကုန်လုံးဖယ်ပစ်လိုက်တာ … ငါးကန်က သိပ်မကျဉ်းဘူး … လင်းတာတော့ တော်တော်လင်းတယ် … ဧည့်ခန်းမှာ ဒီအတိုင်းထားလို့ ရှက်လို့ မျိုးမပွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်နော် …
“ငါးကန်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ အကျဉ်းကျ” ဆိုတာလေး တွေ့မိလုိ့ ရမ်းတုတ် လိုက်တာပါ အန်တီ ဝေ ရေ။ … ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဦးစိန်သော့ ဆိုရင်တော့ မေးသာမေး နော့ … အဲ့ အူးက တီးမှ မြည်တာရယ်။ နာနာ သာတီး …
Nah M Lulin
Need some pro skills to breed that fish
I ve seen some pro fish-breeders use some kind of pot to breed them
They are quite intelligent creatures differ from tropical gold fish
They choose their own counterpart (couple)
Aunty Wei dad is surelyaskillful long-term keen fish enthusiast
(OraPro)
ခုလို ပြောပြ ပေးလို့ ကျေးကျေး ဗျို့  … ကျွန်တော် က ထင်တာ ပြောတာရယ်။ ကျွန်တော့ မယ် ငါးမွေးဖူးတယ် သာ ဆိုတယ်။ ၀ယ်တည်းက အကြမ်းခံ ရဲ့လား . မေးပြီး ၀ယ်တာ.. ပြတ်ကရော ..
လေးစားပါတယ် ဗျာ … :-)။
ပရိုမဟုတ်ပါဘူး … ၀ါသနာအရ ဒီအတိုင်းပဲ မွေးထားတာ … အရင်က ငါးမျိုးစုံခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံး ဒစ်စကတ်တွေပဲ ကျန်ခဲ့တယ် … ဒီကောင်တွေကပဲ အသက်ပြင်းတာလားတော့မသိဘူး …
စာတန်းငါးကြီးတစ်ကောင်တုန်းကတော့ အတော်သံယောဇဉ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် တခြားငါးတွေကိုတော့ သံယောဇဉ်သိပ်မဖြစ်ဘူး … အလှကြည့်ရုံလောက်ပါပဲ …
အိုက်ဒီ စာတမ်းငါးကြီးတွေအကြောင်း ….
ပိုစ့် သပ်သပ်ရေးတင်ချင်သေးရဲ့ ………..
ယပက်လက်တွေ မလေးဒွေ မီလျံဘစ်ဇနက်စ် ဖြစ်ကုန်တဲ့အကြောင်း….
တီလုပ်လိုတော့ …လျိုဟွန်း လို့ခေါ်သဗျာ ….ဘိုလို ဖလားဝါးဟွန်း တဲ့….
လက်ကီးဖစ်ရှ် မျိုးကွဲတမျိုးပေါ့ ….ဖန်းစုအိ(ဗမာများ ဖုန်းရွှေလို့ခေါ်ရဲ့..)ငါးမျိုး …
တိရစ္ဆာန်လောကမှာ ….. မျိုးရင်းစစ်လွန်းရင်လည်း အလွန်တန်ဖိုးရှိသဗျ…
ထို့အတူ မျိုးစပ် (လှလွန်းရင်လည်း) အလွန် ရောင်းကောင်းသဗျ…
လျိုဟွန်းက ဒုတိယ အမျိုးအစားပါဗျာ….
ကျနော်က လျိုဟွန်းတော့ အတော်လေး လိုက်စားခဲ့ဖူးတာကလား…
မဝေရေ ဖရဲမဆီက စက်ဝယ်လို်က်.
ငါးပုံရိုက်ထားတာ ရှိတယ် မတင်ရသေးဘူး ။
အကြံကုန်လာလို့ အိတ်ထဲကဖားပဲ ထုတ်ရိုက်လိုက်တာလေ …
မီးဖိုထဲ ခိုးဝင်လာတဲ့ ကြွက်တွေကိုလဲ သတိပေးထားသေးတယ် .. နင်တို့ အင်တာနက်ပေါ် ရောက်ချင်ပြီလားလို့ …
သိပ်အားလာရင် ကြွက်ကို ချောင်းပြီး ဒါ့ပုံရိုက်ဖို့ စိတ်ကူးထားသေးတယ် …
မဝေရေ အဲ့ဒီကြွက်ကို ရိုက်မယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားတယ် ။ ရိုက်ပြီး တင်သင့်တယ်။ ဒင်းတို့ကို အင်တာနက်မှာ ကြွက်ရောင်းရန်ရှိသည် ဆိုပြီး ကြော်ငြာရအောင်။
ငါးလေးတွေက ၂ နှစ်အတွင်းမှာ တခါမှ မသေဘူးဆိုတော့ သန့်သန့် ရှင်းရှင်းနဲ့ သေချာ ဂရုစိုက်နိုင်လို့ပေါ့။ အသိတယောက်ကတော့ သန့်ရှင်းမှုအားနည်းတော့ မွေးလိုက်သေလိုက်နဲ့ သူ့မလဲ သံသရာလည်နေတယ်။
သူများက EC သမားဆိုပြီး မဟုတ်တာတွေမပြောပါနဲ့
မာမီပေါက် ဘာဘဲပျက်ပျက် သများကို သတိရနော်။
အပူပိုင်းရေချိုငါး လောကရဲ့ ဘုရင်…
ဒစ်စကတ်ကတော့ သများ မမွေးခဲ့ဖူးလို့
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ..
အနော်က ငါးဆို ငါးရန့်တောင် မြင်တာနဲ့ သိဘူးရယ် …
အခု ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာတော့ တော်တော် လှတယ်ဗျ ..
ဖရဲသီးကလည်း ငါးတွေကို အတော် ချစ်ပုံရတယ် …
ဖရဲနဲ့ တွေ့မှ သေချာ စပ်စုကြည့်ရဦးမယ် ..
ကိုဂီ ကတော့ ဒစ်စကတ် ဆိုတာ ..
အပူပိုင်း ရေချို ငါးလောကရဲ့ ဘုရင် ဆိုပဲ …..
ဈေးတော့ အတော်ကြီးမယ် ထင်တယ်နော် …
အကောင်အကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးကွာတယ် … အကောင်ကြီးတွေဆို တစ်ကောင် သုံးသောင်းလောက် ပေးရမယ် …
ငါးတစ်ကောင်တော့မရချင်ဘူးဗျာ ……ငါးထောင်တန်တော့ ရချင်တယ် ကိုအံစာ တို့ ကို ဗြဲသီးတို့ တစ်ယောက် ငါး ရွက်လောက် ပေးချင်ချဘူးလားဗျာ နတ်သဘင် အစည်းဝေးသွားဖို့ စရိတ်ပျက်နေလို့ ဟီး
ငါးရွက်လောက်တော့ အေးဆေးပါ …
ငွေရေး ကြေးရေး ခြေသလုံးမွှေး …
အပေါဆုံးကတော့ ပိုက်ဆံပဲ …
လခထုတ်တဲ့ရက်ကျရင် ပြောပါတယ် …
ကျွန်တော့မှာ ငမန်းပေါက်စ လေးတွေ ရှိတယ် လိုချင်ရင် လက်ဆောင်ပေးပါ့မယ်…….
ယိုးဒယား ငါးမန်း ဆိုတာ ရှိတယ် တထွာလောက်က ပိုမကြီးဘူး ပြောတာပဲ..
မွေးတော့ မမွေးဘူးသေးဘူး။ ငါးမန်း ဆိုလို့ ကြောက်တာလည်း ပါတယ်။ အကောင်ကတော့ ငါးမန်း အကြီးကြီးတွေနဲ့ တပုံစံတည်းပဲ
ကောင်းလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်တွေ အေမီ ကိုယ်လည်း ငှားပါ မမ ရယ်
ငါးလေးတွေ သနားစရာ……. ငါးဖြစ်ရတဲ့ဘ၀မှာတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် မနေရပါလား ? (သံဝေဂရသွားသည်)
မှန်အိမ်ထဲက ငါးလေးတွေ ဘ၀ပျော်စရာ……. ငါးဖြစ်ရတဲ့ဘ၀မှာတောင် တခြားငါးတွေလို အိပ်/စား/ကာမ အားထုတ်စိုက်စရာမလိုပါလား ? (သံဝေဂ ပေးလိုက်သည်)
ဝေေ၀ရဲ့ မော်ဒယ်လေးတွေ လှလိုက်တာ…
ကျွန်မလည်း ငါးမွေးတာကို ငယ်ငယ်လေးထဲက ၀ါသနာပါတယ်။
FlowerHorn ကို (၂)နှစ်လောက်မွေးဖူးတယ်…
အလုပ်မအားတာရယ်…သူတို့ကို ပြုစုရတာ အချိန်ပေးရတာကြောင့် ဆက်မမွေးဖြစ်ဘူး…
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးငါးကတော့ Flower Horn ပါပဲ…အလှမွေးရင်ပြောတာ….
မမဝေရေ.. ငါးလေးတွေက လှလိုက်တာနော်၊ အလှမွေးငါးလေးတွေမြင်ရင် သဘောကျတယ်…
မဝေရေ .. ငါးကန်တွေတွေ့လျှင် .. လှလို့ ကြည့်လိုက်ပေမယ့် … ကိုယ်တိုင်ကျတော့ … သက်တမ်းမရှည်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေအပေါ် သံယောဇဉ်မထားချင်လို့ …. ငါး မမွေးဖြစ်ဘူးပဲ … ။ သံယောဇဉ်ဖြစ်လို့ .. သေသွားပြီဆို .. သွားတဲ့ သူတို့က ဘာမှ မသိပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ လူက .. စိတ်မကောင်းတနှုံ့နှုံ့ ဖြစ်ရတယ် … ။ မဝေရဲ့ ငါးကန်က သေချာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးထားတယ် ထင်တယ် .. ရေညှိတွေနဲ့ .. ငါးချီးတွေ .. မတွေ့ရလို့ပါ …. ။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မှတ်မှတ်ရရ .. ကျောင်းရှေ့က မြောင်းထဲ ဆင်းပြီး .. ဒေါင်းငါးဖမ်းဖူးတယ် … ။ ရေဘူးရဲ့ အဖုံးနဲ့ ခပ်ပြီး .. ရေဗူးထဲထည့်လာလို့ .. မှတ်မှတ်ရရ … ဗျင်းခံရဖူးတယ် … လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်လောက်က ဒဂုံစင်တာမှာ … ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုလုပ်တုန်းက အလှဆင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက .. နံရံကပ် ငါးကန်လေးတွေ .. လုပ်ပြထားတာ .. လှမှ လှပဲ … သူတို့ ငါးကန်ကို ဘယ်လို လုပ်လဲတော့မသိပေမယ့် …အရမ်းသန့်ပြီး အတော်လည်း လန်းတယ် … ၊ သုံးထားတဲ့ .. ဖန်မီးချောင်းတွေက … အရမ်းလင်းတာပဲ … မျက်စိပိတ်မရတဲ့ ငါးတွေက.. မီးရောင်တွေ ထဲ .. မျက်စိအတော်ကျိန်းမှာပါပဲ … ။ငါးကန်က .. လေ၀င်ပေါက်မရှိလို့ ငါးတွေ ရေထဲက အောက်ဆီဂျင်ပဲ ရှုသလားလို့လည်း စိတ်ဝင်စားမိတယယ် …. လုပ်ထားတာတော့ရှယ်ပဲ… ဈေးကလည်း … ကြီးတယ်… ။
ငါးမွေးတာက အထာသိသွားရင် လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားပါတယ် … မွေးပါများလာတော့ အလိုလိုသိသွားတာပေါ့ … အိမ်တံခါးပိတ်ပြီး တစ်ရက်ထက်ပိုပြီး ခရီးထွက်လို့တော့မရဘူး … အိမ်စောင့်တစ်ယောက်ထားပြီး ငါးစာကျွေးဖို့မှာထားပြီးမှ ခရီးသွားလို့ရတယ် …
ဘောလုံးငါးလေးတွေ မွေးဖူးတယ် … ၀၀တုတ်တုတ်လေးတွေ အရမ်းလှတယ် …
ကြောင်ရှိရင် ငါးမွေးလို့အဆင်မပြေဘူး … ကြောင်က ကန်ထဲကငါးကို ရအောင်ခုတ်စားတတ်တယ် …
မဝေရဲ့ မယ်တော်လေးတွေက လှမှလှပဲ ငါးကန်လေးက သန့်နေတာပဲနော်
(2) နှစ်အတွင်း တစ်ကောင်မှ မသေးဘူးဆိုတော့ တော်တော်လေး ဂရုတစ်ိုက်မွေးလို့ထင်တယ်နော် …….
အစ်မ weiwei ကတော့သူခိုးလမ်းပြလုပ်နေပြန်ပြီ ရွာထဲမှာ အိမ်ကအလှမွေးထားတဲ့ငါးခိုးရောင်းပြီး ဘောပွဲလောင်းတဲ့ရွာသားတစ်ချို့ရှိတယ်နော် ဂရုလည်းစိုက်အုံး
အမ ငါးတွေက အစားပုတ်တယ်။
ဆူး ရဲ့ ငါးတွေ အကောင် ၂၀၀ ကျော်လောက် ရှိတယ်။
စားစရိတ် သိပ်မကုန်ဘူး။ ကြာပင်ကထွက်တဲ့ ရေညှိတွေ စားပြီး ၁၅၀၀ ဖိုးလောက် အစာထုတ် တစ်ထုတ် ၀ယ်ထားရင် ကုန်ကို မကုန်ဘူး။
အကောင်သိပ်သေးတော့ သိပ်လည်း များများ မစားနိုင်ကြဘူး။ အစာကျွေးတာ များရင် သူတို့ ရေတွေ နောက်ကုန်ရော.. အိမ်က ကောင်တွေကတော့ ခြေသံ နားစွင့်နေတာ.. လူမြင်ရင် အစာတောင်းတယ် ပြီးတော့ စားလည်း သိပ်မစားနိုင်ကြဘူး။
ရေကန်ကိုတော့ ၁ပတ်တခါ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးတယ်။
ဦးသန်းရွှေတို့အုပ်စု ဘဝတခုမှာတုန်းက ဒေါ်စုနဲ့၈၈ကျောင်းသားတွေ မွေးထားတဲ့ ကန်ထဲက ငါးတွေပေါ့….။ ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်း သဂျီးမကောင်း သဂျီးမကောင်း… ဝိုင်းဆဲဂျကွာ..
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ၀ါဒဖြန့်လို့ ငါးဒုက္ခ တော်တော်ကို ခံလိုက်ရသေးတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်တွေကို ထိုင်ကြည့်နေတာက အချိန်ကုန်မှန်းမသိသာဘူး။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ရှိသမျှငါးရော ငါးကန်တွေရော ပစ္စည်းတွေရော အကုန်ပေးပလိုက်တယ်။ ဟီး ….. ဟီး ……… အဲ့ဒီကတည်းက အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းတို့ ဆွေမျိုးတွေလည်း ငါးဒုက္ခခံလာလိုက်တာ ၅ နှစ်လောက်တောင် ရှိတော့မယ်။ ကျွန်တော်လည်း တစ်နေရာမှာ အေးအေးဆေးဆေး ပြန်နေနိုင်ပြီဆိုရင် ငါးပြန်မွေးဦးမယ်ဗျာ။ အိမ်က အဘွားရဲ့ ……… ငရဲကြီးမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ထူနေအောင် ခံရင်းနဲ့ပေါ့ …………
ခင်ဗျားရဲ့အပေါ်ဆုံးက ဒါ့ပုံက ဒီမှာယူသုံး ထားတာ ပဲဗျ။
ဒါ့ပုံဖိုး မြန်မြန် တောင်းလိုက်ဦး။
ကောင်မယေး က ချစ်ချယာ….ခွိခွိ
ဟုတ်လား … ဓါတ်ပုံကိုကြိုက်တဲ့သူရှိတာသိရလို့ ၀မ်းသာပါ၏ …
ကောင်မလေးနဲ့ ဘာမှမတော်ဘူး …
သတင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
အောင်မယ်ငီး ချစ်ချာလေးဘာလား ဟရို့ ….
ခွင်ခွင်ဂျီး ဒါမိုးကျ မြန်ထှာ….
တယ် ပြောနေကြာဘာဒယ် …..
သွား အတ် လိုက်ဦးမှ
ဒီနေ့ ကစပြီး ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံတော့မယ် နော်…..နော်…နော်